भारत-न्युजिल्याण्ड : वर्षाले रोकिएको खेल आज फेरी सुचारु हुने, फेरी खेल रोकिए के हुन्छ ? – WicketNepal
भारत-न्युजिल्याण्ड : वर्षाले रोकिएको खेल आज फेरी सुचारु हुने, फेरी खेल रोकिए के हुन्छ ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ असार २५, बुधबार ०९:०५
ओल्ड ट्रयाफोर्ड, म्यानचेस्टरमा मंगलबार भएको भारत र न्युजिल्याण्ड बीचको विश्वकप सेमीफाइनल खेल वर्षाले अबरुद्ध हुन पुग्दा पुरै खेल सम्भव हुन सकेन।
खेलमा टस जितेर ब्याटिंग गर्दै न्युजिल्याण्डले ४६.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २११ रन बनाउदा पानि परेको थियो। पानि रोकिंदै पर्दै गर्दा खेल पुनः सुचारु हुन सकेन। कम्तिमा २० ओभरको भए पनि खेल खेलाउन ५ घण्टा प्रतीक्षा गरिएपछि पनि वर्षा नथामिएपछि अम्पायरले खेललाई बुधबार रिजर्भ डेमा खेलाउने निर्णय गरेका हुन्।
अब बुधबार पुनः न्युजिल्याण्ड खेल रोकिएकै अवस्थाबाट ब्याटिंग गर्न उत्रनेछ। खेल रोकिंदा रोस टेलर ६७ तथा टम लाथम ३ रन बनाएर अविजित रहेका थिए। यस अघि कप्तान केन विलियमसनले ६७ रन बनाएका थिए।
विश्वकप सेमीफाइनल र फाइनल खेलको लागि यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रिजर्भ डे राखिएको हो। तर खेल पुनः सुरुबाट भने खेलिनेछैन। खेल स्थानीय समय १०:३० बजे बिहान ( ३:१५ बजे नेपाल , दिउसो ) सुरु हुनेछ।
सेमीफाइनल खेल बराबरी भए के हुन्छ ? सेमीफाइनल खेल बराबरी भए सुपर ओभर गर्दै विजेता तय गरिनेछ।
Well, see you back on Wednesday https://t.co/1sz0J0tgc7 | #INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/RGM3LG3711
न्युजिल्याण्ड-भारत हालसम्मको खेल
अत्यन्त सुस्त सुरुवात गरेको न्युजिल्याण्डका ओपनर मार्टिन गुप्टिललाई १ रन मात्र बनाउदा जस्प्रित बुम्राहले चौथो ओभरमा क्याच आउट गराएका थिए।
१२ रन बनाएर जेम्स निशम ४१ औं ओभरमा पान्ड्याको शिकार बने। यस्तै कोलिन डी ग्रयाण्डहोम १६ रन बनाएर आउट भए जसलाई भुवनेश्वर कुमारले धोनीबाट क्याच आउट गरे।
४६.१ ओभरमा खेल वर्षाले रोकिंदा रोस टेलर ६७ र बनाएर ब्याटिंग गरिरहेका छन्। ८५ बलमा उनले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका छन्। टम लाथम ३ रन बनाएर ब्याटिंग गरिरहेका छन्।
भारतको बलिंगमा भुवनेश्वर कुमार ( ८.१-१-३०-१ ) , जस्प्रित बुम्राह ( ८-१-२५-१ ) , हार्दिक पान्ड्या ( १०-०-५५-१ ) , रभिन्द्र जडेजा ( १०-०-३४-१ ) र युझभेन्द्र चाहल ( १०-०-६३-१ ) ले १/१ विकेट लिए।